Imwe Arm Wheelchair - Karman Healthcare
Ruoko rumwe wiricheya ndeye yakakosha mhando ye wiricheya iyo inobvumidza mushandisi kuzvisundira pachavo muchigaro chemanyorero na kushandisa mashandiro anovabvumidza kushandisa ruoko rumwe chete. Nekusundidzira pane vhiri rimwe zvakare rinosimudzirawo rimwe divi kuti rifambewo. Maitiro avanoita izvi nekubatanidza mavhiri ese ekuruboshwe uye kurudyi pamwechete kuti afambe kumativi ese ari maviri pamwechete. HATIPI kupa rudzi urwu rwechigadzirwa. Nekudaro, chiremba wako anofanirwa kwete kwete chete kuraira, asi zvakare uwane yako unit iwe kana iwe uine zvekurapa zvinodiwa.
Push Kubatsira Wiricheya
Kutenga Nhungamiro Yekufamba Wiricheya
Lightweight Wiricheya Kufunga
Kushandisa Yakafanira Wiricheya Kuchawedzera Hupenyu Hwako Hwezuva Nezuva Hwakareruka